एसाइलममा शुल्क लिइदै, नागरिकता लगायतमा शुल्क बढाइदै, कमेन्ट अवधि समाप्त « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas KHASOKHAS E-MAGAZINE
एसाइलममा शुल्क लिइदै, नागरिकता लगायतमा शुल्क बढाइदै, कमेन्ट अवधि समाप्त
अमेरिकी सरकारले ल्याउन लागेको एसाइलम आवेदनमा शुल्क लिने र नागरिकता लगायतका कैयन आवेदनमा शुल्कबृद्धि गर्ने प्रस्तावित नियममा सार्वजनिक कमेन्ट अवधि आज समाप्त भएको छ । प्रस्तावित नियममा फरबरी १०, २०२० सम्म कमेन्ट अवधि तोकिएको थियो ।
यसअगाडि सन् २०१९ को डिसेम्बर १६ सम्म कमेन्ट अवधि रहेकोमा अवधि थपेर सन् २०१९ को डिसेम्बर ३० सम्म पुराइएको थियो ।
उक्त नियमबारे ११ हजार ६ सय ५ कमेन्ट प्राप्त भइसकेका छन् । उक्त कमेन्टमा प्राप्त सुझावका आधारमा अमेरिकी सरकारले शुल्कबृद्धिबारे अन्तिम नियम प्रकाशित गर्नेछ । तर नयाँ शुल्कबृद्धि कहिलेदेखि लागु हुने भन्नेबारे केही बताइएको छैन ।
कमेन्टहरुमा कैयनले शुल्कबृद्धिको विरोध गरेका छन् भने कतिपयले अमेरिकी नागरिकता आवेदनमा शुल्कबृद्धि गरेर अमेरिकी नागरिकत लिन खोज्नेहरुलाई दण्डित गरिएको आरोप लगाएका छन् । विभिन्न संघसंस्थाहरु र व्यक्तिले कमेन्ट गरेका छन् ।
एसाइलम आवेदनका लागि ५० डलर शुल्क लिने तयारी
नागरिकताका लागि दिइने आवेदनको शुल्क बढाउन प्रस्ताव
कुन आवेदनका लागि अहिले कति शुल्क छ ? प्रस्तावित शुल्क कति छ ? सम्पूर्ण विवरण ।